Home Wararka RW Kheyre oo ku qasbay Xaad in uu ka laabto hadaladii uu...
RW Kheyre oo ku qasbay Xaad in uu ka laabto hadaladii uu sheegay iyo shirarka uu ka waday Muqadishu (Cadeymo)
Sida MOL ay horay idinkuugu soo tabisay Nabdoon Maxamed Xassan Xaad oo aha Gudoomiye ku Xigeenka oday dhaqameedka Beelaha Hawiye isla markaana adeer u ah RW Xassan Cali Kheyre ayaa kulan albaabada u xiran yihiin ka sheegay in uu ka baqayo in dalka uu galo xaalad qalqal siyaasadeed isaga oo ku tilmaamay MW Farmaajo “kali talis” ay qalbiga kaga jirto dareen aargoosi ah. Jimcihii la soo dhaafay ayaa loo arinsanaa in uu Nabadoonka uu qabto kulan qado ah oo uu isku keenayo Beelaha Mudulood iyo Murusade si ay uga arinsadaan xaalada dalka maraayo.
Olalaha iyo kulamada uu abaabulayo Nabadoon Xaad ayaa ku soo beegmay iyada uu RW Kheyre safar ku joogay magalaada Kismaanyo. Ma ahayn wax qarsoodi ah in Nabadoon Xaad ku jiray olole ka dhan ah Madaxweyne Farmaajo isla markaana uu diyaariyay kulan qabiileedyo lagu taageerayo RW Kheyre.
Mid ka mid ah dadka abaabulka kula jiray Nabdoonka ayaa u xaqiijiyay MOL in kulamo abaabulan ay ka dhacayeen magaalada Muqadishu maalmihii la soo dhaafay kaas oo uu hogaanka u hayay Nabadoon Xaad. Muxyadiin Xassan Afrax oo horay u soo noqday Gudoomiyaha Ururada Bulshada Rayidka ee Gobolka Banaadir ayaa u sheegay MOL in Nabadoon Xaad iyo gudiyo uu isagu magacaabay ay shirarka wadaan magaalada Muqadishu.
Muxyadiin Xassan Afrax ayaa yiri “aniga ma aqaan wax la qar-qariyo iyo been sheegid aan macno lahaynin, waa run in Nabadoonka qeyr alaha siiyee uu ka dhiidhiyay dhaqan xumida MW Farmaajo isla markaana uu shirar abaabulayay”waxa u hadalkiisa ku daray “yaaya aniga iyo Garaad Cageey iyo koox kale anaga oo ah ayaa mudo ku dhawaad labo asbuuc ah shiraynay wixii qarash ahna Kheyre ayaa soo dhiibayay, waa hada sida naloo sheegay”.
Hadaba RW Kheyre ayaa waxa uu culays uga yimid saaxibadiisa kuwaas oo kula taliyay in Nabadoonka uu idaacadaha ka hadlo isla markaana uu dafaro ama uu beeneeyo hadalka ka soo yeeray iyo waliba shirarka uu horay u qabtay. RW Kheyre oo mushaar joogta ah siiyo Nabadoonka ayaa waxa uu ka codsaday in Nabadoonka xaalada dajiyo idaacadahan uu ka hadlo oo uu beeneyo xogta warsaxaafadeedku heshay.
Hadaba habeenkii xalay ahaa ayaa Nabadoon Xaad waxa uu la hadlay idaacadaha magaalada Muqadishu kuwaas oo uu ka sheegay in sida hadalka saxaafada u tabishay uusan ahaynin. Iyada oo ay hadleen dadkii uu marqaaday iyo codadkii laga duubay isaga oo shirka ka hadlayo ayuu hadana isku dadyay in uu beeneeyo olalaha uu ka wado magaalada Muqadishu.